Global Voices teny Malagasy » Nodimandry i Elie Rajaonarison, Mpanakanto Malagasy Malaza · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Desambra 2010 17:34 GMT 1	 · Mpanoratra Mialy Andriamananjara Nandika avylavitra
Sokajy: Madagasikara, Haisoratra, Zavakanto & Kolontsaina
Elie Rajaonarison, poeta Malagasy iray, dia nodimandry ny 27 Novambra 2010 teo amin'ny faha-59 taonany. Mpanakanto feno, efa nametraka ny dian-tànany teo amin'ny resaka fakàna sary ny sarimihetsika. Manampahaizana amin'ny Siansa maha-olona ary mpampianatra tao amin'ny Anjerimanontolon'Antananarivo. Namoaka bokin-tononkalo iray izy, Ranitra, ary nandika an'i Jacques Prevert, poeta Frantsay iray ho amin'ny teny Malagasy. Sekreteran'ny Zavakanto ihany koa izy, ary efa nanolotsaina ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nandritra ireny olana nanaraka ny fifidianana izay ho filoham-pirenena tamin'ny 2002 ireny ka niafara tamin'ny fialàn'ny Filoha teo aloha Didier Ratsiraka sy ny fandehanana sesitany any Paris, Frantsa.
Nidera azy ireo mpitoraka bilaogy:
Ndimby izay matetika no mitoraka bilaogy momba ny politika, dia mba niventy ny lafintsarany koa 
Lehilahy namàka lalina tao amin'ny kolontsain'ny firenena nilatsahan'ny tavoniny i Elie, izay hainy nasandratra tamin'ny alalan'ny majikan'ny teniny, ny heviny ary ny asany. Afaka andro vitsy, hiverina amin'ity tany izay nolalainy fatratra ity ny vatana mangatsiakany, raha hitety ny habakabaka kosa ny fanahiny hifamotoana amin'ny tsifahafatesana.
Mamoaka resadresaka iray nifanaovany tamin'i Elie Rajaonarison tamin'ny 2002 i Pierre Maury , fony i Elie Rajaonarison nanatrika ny
atrikasa IOWA ho an'ny mpanoratra  ary nihaona tamina poeta sy mpanoratra avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Nandritra ny resadresaka, manainga ireo Malagasy mpanoratra rehetra i Elie
Rajaonarison mba hifandray amin'izao tontolo izao sy hivoaka amin'ny maha mponina anaty nosy azy.
“Ny ankabeazan'ireo firenena tonga eto dia manao ezaka ho fandikàna ny asa soratry ry zareo, sy mampiditra azy ho ao anatin'ny kolontsaina be mpampiasa amin'izao androntsika izao. Ny toetra maha-Nosy antsika tsy tokony ho jerena amin'ny lafiny miiba. Ny mifanohitra amin'izany aza. Manana vintana isika amin'ny fanànana indray miaraka ny fahatakarana ny fifikirana sy ny fitsangantsanganana toy ireo rehetra monina amina nosy. Efa tafapetraka ny resaka manontany ny momba ny maha-izy ny tena, ary tokony hitohy hanohina antsika hatrany. Fotoana ankehitriny “hitsangatsanganana”. Tonga ny fotoana handehanana mijery ny any an-kafa any sy mampitodika ny hafa hijery antsika (tsy misy tsilalaon-teny diso toerana), amin'ny teny roa: misy! Mipetraka amina toerana mendrika ao anaty sarintanin'ny literatiora manerantany. Manana ny ilaina rehetra isika hanatràrana io fanamby io: literatiora amin'ny tenim-pirenena tsara fototra ary tsy mitsahatra mivoatra, fifehezana ny teny frantsay izay fikirin'ny intelligentsia, ny fironana “voajanahary” ao amin'ny Malagasy hianatra teny vahiny ary indrindra fa ny teny angliosy, ny fivoaran'ny Ntic izay tena maha tendan-kanina ny tanora an-tanan-dehibe maharaka toetr'andro nefa hipariaka amin'ny sosona sosialy rehetra sy any amin'ny faritra rehetra. Tombondahiny maro, andrana maro izay ankehitriny dia ilaintsika avadika amin'ny fandikàna ny asa soratsika ho amin'ny tenim-pirenena hafa satria miandry antsika izao tontolo izao ary mila antsika koa izy izy mba hisy.”
SipaKV manoratra momba ny lohateny Ranitra, navoaka tamin'ny 1992, ary ny hany bokin-tononkalo navoakan'i Elie Rajaonarison, na dia efa nahasoratra tononkalo maherin'ny 500 aza izy tamin'ny 1992.
Fa ny tena tiako indrindra dia ny tsilalaonteny ao anatin'ny fehinteny momba ilay lohateny “Ranitra”, tahaka izay anazavan'ilay mpamehy azy.
Ranitra raha rasina ho mpamari-toetra dia midika “mandidy”, mety handratra, afaka midika koa hoe “marani-tsaina”
Ranitra raisina ho tenin-jatovo dia midika koa hoe “manadrohadro”, toy ny mila sotasota, mila ady.
Farany, Ranitra dia midika koa hoe “namana”, amin'ny teny Merina, namana miafina toy ny “sakaiza”, vady ranitra.
Ary ity tononkalo mangidy iray nezahako nadika. Mivandravandra be ao anatin'ilay tononkalo ny antony itadiavan'i Elie Rajaonarison hamakiana amin'ny feo avo ireo tononkalony. Notsongaiko manokana izy ity, izay ho tsapanao rehefa mijery akaiky ny daty nanoratana azy ianao.
mangidy raha mangidy ny ketok’hanoanana
manaitra anao maraina
tsy mampatory ny alina
mangidy raha mangidy ny vidin-katsembohana
tsy hitanao akory
toa lany tsy nalaina
fa ritra notrosaina
! …fa mafy noho izany
ny tsy afaka mitraka fa resin’ny taraina
ny tsy afaka manofy fa ngoly-savolaina
ny tsy manaiky hiombona fa teritery sainamangidy daholo izany !
fa eo am-perin-gidin’ny isanandro maizina
no misy Hazavana
no misy Fifaliana
mitosaka mandresy ny afero tsy azo laizina
dia miakatra maredona ny Antsan’ireo vonona
handresy ny isanandro
hametaka ny tarany ho lovan’ny Tantara
mihirà Ry Tendrombohitra
fa kanto noho ny kanto
misandratra tsy miato tsy mety resy an’ady
ilay Madagasikara !
Nosoratan'i Elie Rajaonarison ny 15 Augositra 1990, taona 1 sy 5 andro talohan'ny vonoolona teny Iavoloha.
Namela mananontena iray, zanakavavy telo ary zafikely maro i Elie Rajaonarison.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/12/02/11119/
 Ndimby izay matetika no mitoraka bilaogy momba ny politika, dia mba niventy ny lafintsarany koa: http://www.madagascar-tribune.com/Hiteny-aho-hiteny-hommage-a-Elie,15145.html
 atrikasa IOWA ho an'ny mpanoratra: http://www.uiowa.edu/~iww/
 SipaKV : http://www.haisoratra.org/gasycool/?p=393